အလှပြင်ဆိုင် လို အရေပြား ဆေးခန်းလို နဲ့ ဂျင်းထည့်နေ တဲ့ မန္တလေးက တရုတ်ဆေးခန်းတွေ – Let Pan Daily
ဒီနေ့ အတွေ့အကြုံ ကတော့ လွမ်း လို့ ရတယ် ဝန်ထမ်း ဆရာဝန် အပေါင်း တို့ .. ဖြူဖြူ သွယ်သွယ် လေဒီလေး နှစ်ယောက် စကားသံ ဝဲဝဲနဲ့ ကိုယ့်ဆေးခန်းကို ရောက်လာတယ် ။ အကြောင်းရင်း က ပိုးသတ်ဆေး ထိုးချင်လိုတဲ့ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကျော် မြစ်ကြီးနားမှာ ဆာဝန်ပေါက်စ ဘဝ ကတည်းက ကိုယ့် ဆေးခန်းလေးကို အဲ့သလို ပိုးသတ်ဆေး ထိုးချင် လို့ပါ ဆရာ… ဆိုပြီး လာခဲ့တဲ့ လေဒီတွေ နည်းမှ မနည်းပဲ ။ တချို့နဲ့တောင် ဘော်ဒါ ဘော်ဂျွတ်တွေ ဖြစ် လိုက်သေး ။ (အဲ့ အကြောင်း အသေးစိတ်တွေ နောက်မှ ရေးမယ် )
အခု လေဒီ တွေရဲ့ History ကို အစ ကောက်တော့ မှ ကိုယ့်မှာ တအံ့တဩ ဖြစ်ရတယ် ။ မန်းလေး ရဲ့ တစ်ခုသော တရုတ် နံမည်နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ အလှပြင်ဆိုင်လိုလို အလှအပ အရေပြား ဆိုင်ရာ ကုသမှုနေရာလိုလိုမှာ မျက်ရစ် သွားဖော်တဲ့ Minor operation သွားလုပ်ခဲ့တာတဲ့ ။ ဟိုက… မှာလိုက်သေး သဘောကောင်း တဲ့ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ဆီ ပိုးသတ်ဆေး သွားထိုးလိုက်လို့… ဆိုလို့ လာတာပါတဲ့… ။
အတော် စိတ်ဝင်စားသွားတယ်.. ညီမလေးတို့ ကို ခွဲစိတ် ပေးတာ ဆရာဝန် လား ဆိုတော့ မသိဘူးတဲ့… နိုင်ငံခြားက Certificate တော့ ပြတယ်တဲ့ ။ ထားလိုက်တော့ ဆက်မေးမိတယ်.. မခွဲခင် ဆီးချိုသွေးချို စစ်တာတွေ သွေးပေါင် ချိန်တာတွေ ထုံဆေး တည့်မတည့် စမ်းတာတွေ လုပ်လား ဆိုတော့ မလုပ် ပါဘူးတဲ့ ။ သေချာပြီပေါ့ ဆရာဝန် မဟုတ်တာ ။
ခွဲစိတ် ခဲ့တဲ့ ပတ်တီးတွေ ဖြည်ကြည့်မိတော့ ပါးပါးလေး ပါပဲ ။ အပေါ်မျက်ခွံကို မျက်ရစ် အတိုင်း အရာလေး ပေးတယ် ။ အပေါ်ဖက် အရေပြားကို နည်းနည်းလေး ခေါက်ပြီး အရေပြားအောက်မှာ ချုပ်ထားတယ်။ အရစ်လေး အချိုင့်လေး ပေါ်အောင်.. ပြီးတော့ အရေပြားအစွန်းအချင်းချင်း ဟောလိဝုဒ် လိုက်တယ်… ဒါပဲ ။
တကယ့်ကို အသေးစား လွယ်လွန်းတဲ့ ခွဲစိတ်မှုပဲ ။ ဆရာဝန် အခေါ် Day surgery ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကို မေးကြည့်တယ်.. လုပ်တာ ဘယ်လောက် ကြာလဲလို့ ? မျက်ခွံ နှစ်ဖက်လုံးကို တစ်နာရီ နီးပါးလောက်ပဲ ကြာတယ်တဲ့ ။ ထုံဆေး တော့ ထိုးတယ်တဲ့ ။ သိပ်မနာပါဘူးတဲ့ ။
လာပြီ အဓိက Question! ညီမလေး တို့ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက် ပေးလိုက်ရလဲ.. ဆိုတော့ တစ်ယောက် ကို ၁၂ သိန်း တဲ့ ။ ကိုယ့်မှာ မယုံသင်္ကာ နဲ့ ထပ်မေးမိတယ်။ အဟုတ်ကို ၁၂ သိန်းပဲ။ သွေးလည်း မစစ်ဘူး ဆေးလည်း မစမ်းဘူး မေးခိုင် ကာကွယ်ဆေးလည်း မထိုးဘူး ပိုးသတ်ဆေး လည်း နီးရာ ဆရာဝန်ထံ သွားထိုးတဲ့ သောက်ဆေးလည်း တစ်လုံး မှတောင် မပေးလိုက်ဘူး.. အသေးစား ခွဲစိတ်မှုလေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
(ည အိပ်စရာတောင် မလိုတဲ့ အသေးစား ခွဲစိတ်မှု ) အလှအပ ရေးရာ ကိစ္စပေါ့ ။ ကုန်ကျ ခဲ့တဲ့ ငွေက တစ်ယောက် ကို ၁၂ သိန်း ။ ခွဲပေးသူက ဆရာဝန် မဟုတ်။ တစ်လ လုံး လုပ်ခလစာ သုံးသိန်း ပျော့ပျော့ သုံး သိန်း စွန်းစွန်း ဝန်ထမ်း ဆရာဝန် အပေါင်းတို့ အမျှ… အမျှ… အမျှ…..
(ဒေါက်တာ တေဇကျော်… မေမြို့ )
လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲ ပါလာတဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှပ် သွားသောအခါ …(ဖတ်စေချင် လွန်းလို့ပါ……)